Taliyaha Ciidanka Kenya u qaabilsan AMISOM oo kormeer qarsoodi ah ku tagay Xeryaha KDF . | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Taliyaha Ciidanka Kenya u qaabilsan AMISOM oo kormeer qarsoodi ah ku tagay...
Taliyaha Ciidanka Kenya u qaabilsan AMISOM oo kormeer qarsoodi ah ku tagay Xeryaha KDF .
Taliyaha qaybta 2-aad ee AMISOM Jeff Nyagah ayaa kormeer labo cishe ah ku tagay Xeryo Ciidamada Kenya ee ku howlgalka Magaca Midowga Afrika ku tagay saldhigyada kala ah Kubiyoow, Raaskaambooni, Kuday, Cabdalla Biroole, Garoonka Diyaaradaha iyo Dekedda Kismaayo oo mas’uul ay ka yihiin sugidda amnigooda.
Taliyaha ayaa ugu horeyn u mahadceliyay Ciidamada difaaca Kenya KDF ee ku sugan Dhammaan Xarumaha uu tagay isaga oo ku amaanay qaabka ay uga shaqeynayaan mas’uuliyadda amni ee saaran.
Waxa uu ku bogaadiyay in ay waajibaadkooda kordhiyaan si ay uga soo baxaan mas’uuliyadda ka saaran ilaalinta Degmooyinka, xarumaha Muhiimka iyo goobaha kale ay ka joogaan Gobolka Jubada Hoose ee DG Jubbaland.
War kasoo baxay Howlgalka Midowga Afrika ayaa lagu xaqiijiyay in taliyaha uu dhameystay kormeerkiisa labada cishe ah isaga oo ku qiimeeyay Askarta difaaca Kenya ee ku howlgasha Magaca AMISOM.
Taliyaha waxa uu la kulmay sarkaal sare oo katirsan Ciidamada Badda Mareykanka oo saldhig ku leh Garoonka Diyaaradaha Kismaayo inkasta oo aan la baahinta xogta wadahadalkooda sida ku xusan warka kasoo baxay AMISOM.
Saraakiisha iyo madaxda Kenya waxa ay socdaal qarsoodi ah ku tagaan xeryaha ciidamada KDF ay ku leeyihiin Gobollada Jubbooyinka & Gedo waxaana faah-faahinta safarkooda la sheegaa marka ay soo idleeyaan, taasi waxaa loo saleeyay sababo dhanka Amniga ah.
Previous articleFaahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay Muqdisho
Next articleQarax ka dhacay dugsi ay arday u fadhiyeen imtixaan magaalada Balcad
Putin & Biden oo maanta ku kulmaya Geneva.
UNITED NATIONS SUPPORT OFFICE IN SOMALIA (UNSOS) – ENVIRONMENTAL OFFICER
UNITED NATIONS SUPPORT OFFICE IN SOMALIA (UNSOS) – FUEL ASSISTANT
UNITED NATIONS SUPPORT OFFICE IN SOMALIA (UNSOS) Job for: RATIONS ASSISTANT
Faahfaahino kasoo baxaya weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay...
RW Rooble oo maanta booqday degmada Deyniile
Wasiir Dubbe; ”Ma jiro Askari ka tirsan Ciidamada Soomaaliya oo ka...
KENYA oo dib u fasaxday duulimaadyada Soomaaliya
xogdoonnews - June 16, 2021